Multi-function embhedeni wokubelethisa B-45
I-B-45 Multi-function obstetric embhede kasayizi: 1800 (L) × 600 (W) × 650/895 (H) mm Multi-injongo yetherbhulethi yakhelwe ukulethwa, ukuhushula isisu nokuhlolwa kwe-gynecological. Kubonakala ngokusebenza okulula, umnotho, ukuphepha kanye nokwethenjwa. Yakhiwa ingaphezulu kombhede, umbhede kanye nesisekelo sebhede. Ingaphezulu lombhede lifaka isigaba sangemuva, isigaba sesihlalo nesigaba somlenze. Ukunyakaza okuphezulu kwesigaba sangemuva kanye nokuhamba phambili nangasemuva kokuphakama kombhede kulawulwa isondo lesandla esisebenza, elenza ...
Umbhede wokubeletha we-Epoxy Bet 43 we-EPL
Ubukhulu: 1680mm (L) * 620mm (W) * 800mm (H) Izici eziyinhloko: 1. ifreyimu ehlanganisiwe ye-epoxy, umatilasi wekhwalithi ephezulu ye-polyurethane; Izingxenye ezingama-2.Tree, ukuphumula emuva (kulungiswe intwasahlobo kagesi), umsebenzi wokuphumula kwamadolo (kulawulwa ngohlelo lwe-gear mechanic); 3. Isisetshenziswa sokuxhasa umlenze esiphindwe kabili, nesitsha esisodwa se-SS ngaphansi kwetafula 4. Isisekelo sonyawo ngezinyawo, unyawo ngerabha elwa nomsindo 5. Ukwakhiwa kwemigwaqo okusindisa imigwaqo.
Umbhede ongavikelekile wensimbi engu-B-42-1
usayizi: 1680mm (L) * 600mm (W) * 800mm (H) Isici esiyinhloko: 1. Uhlaka lwensimbi engenasici, umatilasi wekhwalithi ephezulu ye-polyurethane; 2. Izigaba ezintathu, ukuphumula emuva (okulungiswe isiphethu segesi), umsebenzi wokuphumula kwamadolo (kulawulwa ngohlelo lwe-gear mechanic); 3. Isisetshenziswa sokuxhasa umlenze esiphindwe kabili, nesitsha esisodwa se-SS ngaphansi kwetafula 4. Isisekelo sonyawo ngezinyawo, unyawo ngerabha elwa nomsindo 5. Ukwakhiwa kwemigwaqo okusindisa imigwaqo.
Ukulungiswa kwe-B-48 C1-standard Configurations ○ ibhodi lekhanda le-ABS (1) ○ Imigwaqo eseceleni ye-ABS ene-damping (2) ○ I-Motors (3) ○ Imilenze isekela (2) gr Izimbobo zabasebenzi (2) holes Izimbobo zePole ze-IV (2) ○ indawo enkulu kanokusho ukukhiya abaxhasi
I-B-48A1 Igumbi le-LDR liyigumbi elilodwa labasebenzi, ukulethwa, ukululama, nokuhlehliswa kwasemva kokubeletha (LDRP). Imishini yale mibhede ilungele zonke izinqubo zokubeletha kanye nokulethwa ngaphandle kwesigaba se-cesarean kanye nokulethwa okujwayelekile kwe-anesthesia. Onke amakamelo okulethwa okukhethekile enzelwe yonke inqubo yokulethwa kusukela ekuzalweni kuya ekunakekelweni kwangemva kokubeletha, futhi angakwazi ukubhekana nezinkinga eziningi. Umbhede we-LDR, njengemishini yokhiye egumbini elilodwa kungashintshwa ngokuphelele ukuze kulungiselelwe ukukhombisa ukuqashelwa kanye ne-positio ehlukahlukene yokulethwa ...